Arsenal Oo Premier League Jooga Si Lama Filaan Ah Uga Dhigtay Bartilmaameedkooda 1-aad Ee Ay Ku Badalayaan Arsene Wenger – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Arsenal Oo Premier League Jooga Si Lama Filaan Ah Uga Dhigtay Bartilmaameedkooda 1-aad Ee Ay Ku Badalayaan Arsene Wenger
Arsenal Oo Premier League Jooga Si Lama Filaan Ah Uga Dhigtay Bartilmaameedkooda 1-aad Ee Ay Ku Badalayaan Arsene Wenger
Kooxda Arsenal ayaa tababarihii ay ku badali lahayd ka dhex arkootay horyaalka premier League xilli mustaqbalka Arsene Wenger uu mugdi ku jiro kadib guuldaradii bahdilka ahayd ee Arsenal ka soo gaartay kooxda Chelsea Final-ka Carabao cup-ka kana dhacay garoonka Wembley.
Arsenal ayaa doonaysa in ay tababare cusub ka dhigato tababaraha kooxda chelsea ee Antonio Conte kaas oo loo badinayo in uu chelsea isaga tago dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Arsene Wenger ayaa heshiis cusub oo 2 sano ah u saxiiay Arsenal xagaagii inkasta oo ay kooxda Arsenal ka hadhay champions League markii ugu horaysay tan iyo markii uu Arsene Wenger kooxda yimid.
Maamulka Arsenal ayaa kalsoonida siiyay tababaraha reer France laakiin kooxda ayaa qaab ciyaareed liidata ku bilowday xilli ciyaareedkan iyada oo kaalinta 6-aad kaga jirta kala saraynta horyaalka Premier League.
Gunners ayaa sidoo kale ku ka hadhay koobabka maxaliga ah iyaga ee FA Cup-ka iyo Carabao cup-ka oo ay Finalka guuldaro kala kulantay Man city.
Wargayska Daily Star ayaa sheegay in ay Maamulka Gunners isku af garteen in ay Antonio Conte ka dhigtaan tababarohooda cusub Dhamaadka xilli ciyaareedkan hadii uu ka tago kooxda Chelsea.
Conte ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay kooxda chelsea kula guulaystay horyaalka premier League laakiin xiriir xun oo ay maamulka Blues la leeyahay ayaa keentay khilaafka keeni karta in uu isaga tago kooxda Chelsea.
Conte ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa xulka qaranka Italy xilli madaxda sare ee xiriirka Italy si cad u sheegeen in uu Conte yahay bartilmaameedkooda 1-aad ee ay doonayaan.